उदयपुरमा स्कारपियो दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते - Gaunbeshi
उदयपुरमा स्कारपियो दुर्घटना हुँदा ५ जनाको मृत्यु, ३ जना घाइते
Posted on २ कार्तिक २०७७, आईतवार ०८:४४ Author Gaunbeshi Comment(0)
काठमाडौं । उदयपुरको कटारीमा गएराति जिप दुर्घटना हुँदा ५ जनाको ज्यान गएको छ भने ३ जना घाइते भएका छन् । प्रहरीका अनुसार भैरहवाबाट ओखलढुंगा जाँदै गरेको बा २० त ७१७१ नम्बरको स्कारपियो दुर्घटनामा परेको हो ।
उक्त दुर्घटनामा ज्यान गुमाउनेहरुमा ओखलढुंगा मानेभन्ज्याङ गाउँपालिका–९ का ४५ वर्षीय रामबहादुर सार्की र सोही स्थानका २६ वर्षीय कर्ण सार्की रहेका छन् भने अन्यको सनाखत हुन सकेको छैन ।
दुर्घटनामा घाइते भएकाहरुको कटारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको जनाइएको छ । स्कोर्पियो सिद्धिचरण राजमार्गबाट करिब ९ सय मिटर तल खसेको प्रहरीले जनाएको छ ।
न्युज २४ छोडेर छोडेपछि रवि लामिछाले नयाँ च्यानल यसरी टिभी च्यानल खोले । ‘सिधा कुरा’ आउँछ कि आउँदैन ?(भिडियो हेर्नुस)
Posted on ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार १७:११ Author Gaunbeshi
सञ्चारकर्मी रवि लामिछाने लगायतले नयाँ टेलिभिजन च्यानल ल्याएका छन्। लामिछाने म्यानेजिङ डाइरेक्टर छन्। उक्त टिभीको नाम ‘ग्यालेक्सी फोरके’ हो। नेपालमा पहिलो फोरके टिभी आफूहरूले ल्याएको लामिछानेले बताए। मंगलबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम गरी लामिछानेले नेपालमा थप एक सञ्चार माध्यम थप भएको बताए। जनताका आवाजलाई प्राथमिकता दिने र मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम दिन टेलिभिजन ल्याइएको उनले बताए। ग्यालेक्सीमा क्राइम […]
सामान्य कचौराले भाग्य चम्काइदियो, विक्री भयो अरबौ रुपैयाँमा
Posted on २० आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:५७ Author Gaunbeshi
एजेन्सी – मानिसहरुको भाग्य जुन बेला पनि चम्किन सक्छ । अहिले कुनै मानिस गरिब छ भने भाग्य चम्किएमा धनी पनि हुन सक्छ । यस्तै एक व्यक्तिको सामान्य कचौराले भाग्य चम्किइदिएको छ । तपाईलाई पत्यार नलाग्ला रु तर चीनी र माटोबाट बनेको उक्त एउटा कचौराको मुल्य अहिले सम्मकै सर्वाधिक रहेको छ । एक हजार वर्ष पुरानो […]
भारतमा कोरोनाबाट एकै दिनमा यति धेरैको निधन
Posted on १९ चैत्र २०७७, बिहीबार १४:३३ Author punam punma
एजेन्सी । भारतमा कोरोनाबाट एकै दिनमा ४५९ जनाको निधन भएको छ । एकै दिनमा कोरोनाबाट ४५९ जनाको निधन हुनु यसवर्ष शुरु भएयताको नै सब भन्दा धेरै संख्या भएको केन्द्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्रालयले बिहीबार जानकारी दिएको छ । बुधबार कोरोनाबाट ४५९ जनाको निधन भएपछि यहाँ यस प्रकोपको कारण ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या एक लाख ६२ […]
पाथीभरा माताले तपाईको मनोकामना पूरा गरुन्, हेर्नुहोस् कात्तिक २ गते आइतबारको राशिफल
श्रीमतीको बैंक कार्डबाट गर्लफ्रेण्डको जरिवाना तिरेपछि…
Posted on १३ चैत्र २०७७, शुक्रबार १६:२६ Author punam punma
Posted on ४ कार्तिक २०७७, मंगलवार ०९:१८ Author Gaunbeshi
तपाईको बुधवारको भाग्य यस्तो छ, पाथिभरा माताको दर्शनगरी फागुन १२ गतेको राशिफल हेर्नुहोस
Posted on १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार ०६:२३ Author Gaunbeshi
जति कसरत, खानपिनमा ध्यान दिँदादिँदै पनि मोटोपन घटेन भने यी २० वैज्ञानिक उपाय प्रयोग गर्नुहोस
Posted on ११ फाल्गुन २०७७, मंगलवार ०९:५५ Author Gaunbeshi
श्री पाथिभरा माताको दर्शन गरि सोमबार ०७ गते, हेर्नुहोस राशि अनुसार तपाईंको भाग्यफल यस्तो छ
भर्खरै बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गर्यो स्कुल बन्द गर्ने र संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय
अन्तर्राष्ट्रिय क ल बाई पास सं चा ल न गरिरहेको अवस्थामा काठमाडौं बाटै यसरी समातिए पछि….
१७ बर्षिया छोरीको पे’ टमा रहेको ग’र्भ बाबुले मेरै हो भनेपछि…
नवराज विक मृ त्यु प्रकरण ७३ नम्बरको निवेदनमा आज बहस सकिने
बाहिर जान उपराष्ट्रपतिलाई सेनाले लगायो बन्देज
Posted on १२ फाल्गुन २०७७, बुधबार १०:३० Author Gaunbeshi
Posted on ५ कार्तिक २०७७, बुधबार ०७:३७ Author Gaunbeshi
आजको मौसम पूर्वानुमान पहाडी भूभागका एक वा दुई स्थानमा अपरान्हपछि मेघगर्जन, चट्याङ
Posted on ३१ चैत्र २०७७, मंगलवार ०९:२१ Author punam punma